Thatha iKnotice! Ukuvala iZithuba zeTekhnoloji yeNtengiso | Martech Zone
Thatha iKnotice! Ukuvala iZithuba zeTekhnoloji yeNtengiso
NgoLwesine, Aprili 3, 2008 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
In 2006, Inokuba bendikhe ndangaphambi kwexesha xa ndiqikelela ukuba u-2007 uya kuba ngunyaka womdibaniso womdibaniso womsebenzisi. Ngokwenyani khange ihambele phambili, kodwa ezinye iinkampani bezisebenza kuyo!
kuba I-2008, ndiqikelele ubuchule obuninzi 'obuncinci' -Kubandakanya ukuthengisa nge-imeyile. I-Target ngqo, umzekelo, ibisandula ukubhengeza okucwangcisiweyo ukukhutshwa kwamaphepha okufika. Ezinye iinkampani ziyithatha kancinci, nangona kunjalo!
I-Knotice inokuba sisibikezelo sam!
Kule veki, bendonwabile ngokuthetha noBrian Deagan, CEO we Isaziso. Ndakhe ndathetha ngaphambili malunga nokuba kunzima kangakanani kubarhwebi ukuba benze isicwangciso xa bethengisa. "I-batch kunye ne-blast" yinto eqhelekileyo kuba lonke ixesha lenziwa kulwenziwo lwe-imeyile kunokulungiselela. Kubaluleke kakhulu ukuba inkampani ikhuphe umkhankaso 'kumhla' wokungahoyi nokuba lelona phulo lalifanelekile na kwaye liyakufezekisa ulindelo lwabafundi balo.
Ukusukela ngo-2003, uKnotice ebesebenza ngokuzolileyo ekuvaleni umsantsa! I-Knotice idibanise i-imeyile, ukuthengisa okuhambayo, amaphepha ewebhu, idatha yohlalutyo, uphando kunye nemigaqo yokukhangela ukuhambisa unxibelelwano ekujolise kulo zonke abaneshologu. Endaweni yokuba 'ukuloba nge-dynamite', iKnotice igxila kwisithiyelo esifanelekileyo kwiindawo ezifanelekileyo!
Umzekelo woThengiso lwamaNqanaba amaNinzi
Ndikhangela kuGoogle iilensi zeNikon D40 yentombi yam kwaye ndigqiba kwiwebhusayithi. Uhlalutyo luya kubonelela ngamagama ophando endiwasebenzisileyo ukuya kwisiza. Ukuba kunikwe amandla, iwebhusayithi iya kwazi ngoku ukuba ndineNikon D40.
Ngoku - xa mna buya ukuya kwisiza okanye-nokuba bhetele- kwi email ukuba ndibhalisela indawo, ndifumana imveliso efanelekileyo ngokubhekisele kwiNikon D40 ukusukela ngoku. Mhlawumbi ndiphendula imibuzo embalwa kuvavanyo malunga nomdla wam wokufota, kwaye umxholo ujolise ngakumbi kubume bendawo, iprofayili, okanye iimveliso ezincinci zokufota, iincwadi kunye neeDVD.
Nasi isiphako esivela I-Knotice kwiqonga labo leConcentri:
Ngokusebenzisa iqonga lethu iConcentri, sinikezela ngendlela elula nenamandla yokudala kunye nokulawula unxibelelwano olufanelekileyo kakhulu, olunamanqanaba amaninzi kunxibelelwano lwe-imeyile, iselfowuni kunye newebhu. NgeConcentri, abathengisi banokuzibandakanya ngokulula kubasebenzisi bedijithali banamhlanje ukuze bakhulise ingeniso, ngelixa begcina amava e-brand angaguqukiyo, benza lula imisebenzi yentengiso, kunye nokuphelisa iindleko ezingafunekiyo. Kwaye ngenxa yokuba ihanjiswa kwimfuno, abathengisi bahlawula kuphela into abayifunayo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-Knotice ayifuni ukuba yonke into ibanjwe kwaye iqhutywe kwiwebhusayithi yabo. Banenkonzo yeWebhu eyomeleleyo kunye nomxholo wabo owenzelwe wena unokufakwa kwiwebhusayithi yakho- nokuba nge-div okanye iframe. Unamandla!
Kubonakala ngathi i-Knotice iqhubeke kakhulu endleleni kunezinye iinkampani ezikule ndawo. Zininzi iwebhu, kubahlalutyi kunye nabanikezeli beenkonzo ze-imeyile baxakeke kakhulu begxile kukhuphiswano lwabo nakwizinto zabo ezililize, bayalilibala elona ngxaki-amashishini achitha ixesha elininzi, umgudu, kunye nemali edibanisa zonke ezi zisombululo zingafaniyo ukufumana iziphumo ezinentsingiselo.
Ndijonge phambili ekuboneni okuninzi kwiKnotice!
Kungenxa yokuba Unako…
Epreli 4, 2008 ngo-11: 45 AM
Ngaba ufuna iilensi ezingabizi kakhulu zeNikon D40? I-Sigma ine-17-35mm f / 2.8-4 onokuyifumana kwiCameta ukuya eAmazon nge $ 240. Yiyo kuphela i-f / 2.8 yeelensi ezakhelwe-ngaphakathi kugxilwe kwi-motor efunwa yi-D40 ye-autofocus phantsi kwe- $ 1000, kwaye ndonwabile ngokwenene.
Uninzi lweefoto zam zamva nje zithathiwe ngeelensi. Umzekelo.
Njengecala, andizukusebenzisa i-D40 okanye ilensi ngakumbi njengoko le mifanekiso, ithathwe nge-D40 kunye ne-Sigma 17-35mm f / 2.8-4 lens ibonisa ukuba kutheni! 🙂